‘‘जोखिमका काममा युवाहरु विदेश नगई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्नु राम्रो’’ – Pahilo Page
‘‘जोखिमका काममा युवाहरु विदेश नगई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्नु राम्रो’’
२८ पुष २०७५, शनिबार १९:१२ 760 पटक हेरिएको
दाङ, २८ पुस । घोराही उपमहानगरपालिका ६ अघरामा कृषि फार्मको उद्घाटन गरिएको छ । जनज्योति पशुपालक कृषक सहकारी संस्था लि. घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ ले अघरामा कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । जग्गा भाडामा ल्याएर बाख्रापालन र नमूना अर्गानिक खेतीका लागि फार्म सञ्चालनमा ल्याइएको सहकारीले जनाएको छ ।
प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव उदय जीएमले ब्यानर खोलेर फार्मको उद्घाटन गरेका हुन् । त्यस्तै विशिष्ट अतिथि प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र केसीले सुख्खाबारीमा पानी छर्केर उद्घाटन गरेका हुन् । नजिकैको खोल्सामा कुवा खनेर सिंचाइका लागि पानीको ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख अतिथि जीएमले देशभित्रै काम गरेर खाने वातावरण बनाउन यस्ता सहकारीहरुको आवश्यकता रहेको बताए । ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको र उनीहरु जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै उनले थोरै भए पनि देशभित्रै केही गर्नका लागि यस्ता सहकारीहरुले उत्पादनमूलक कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।
विशिष्ट अतिथि केसीले एक्लै ठूलो लगानी गर्न नसक्नेहरुले स–सानो पूँजी जम्मा गरेर लगानी गर्ने भएकाले सहकारीमा आफै मालिक र आफै कामदार हुँदा अपनत्व हुने बताए । सहकारीमा पनि हुनेखानेको पहुँच रहेको औल्याउँदै उनले वास्तविक किसानको नाम मात्रै लिएर हुनेखानेहरुले नाफा लिने क्रम रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दाङको दक्षिण क्षेत्र ब्यावसायिक कृषिको पकेट क्षेत्र बन्दै गएको पनि उनले बताए ।
सहकारीका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्रबहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन सहकारीका अध्यक्ष टीका बुढाले गरेका थिए । स्वागत मन्तव्य सदस्य गिरा रिजालले गरेकी थिइन् ।